Mediam-bahoaka · Jona, 2016 · Global Voices teny Malagasy
Mediam-bahoaka · Jona, 2016
Tantara mikasika ny Mediam-bahoaka tamin'ny Jona, 2016
Tsy Tsara Fiafara ny Romeo Sy Juliette-n'i Tajikistana
Azia Afovoany sy Kaokazy 30 Jona 2016
Tantara iray hafa momba ny loza tao amin'ny firenen'i Azia Afovoany izay toa mamokatra izany matetika noho ny ankamaroany.
Amerika Latina 30 Jona 2016
Manodidina ny 85% ny tsy fahampian'ny fanafody ao Venezoela. Ireo vondrona kely fidiram-bola sy ny vondrona indizeny mila fitsaboana no tena lasibatra.
Ondry 120 Maty Noho Ny Tselatra Tao Kyrgyzstan, Niteraka Fampitahana Parlemantera
"Tsy ireo ondry 120 ireo, fa ondry 120 hafa!"
Manova Ny Endrik'Izao Tontolo Izao Hitovy Amin'ny Fanombohan'ny Game Of Thrones Ny Arzantiniana Iray Mpanao Sarimiaina
"Nahita ilay fanolorana aho ary ny zavatra tonga tao an-tsaiko voalohany dia ny hanao dikan'io maneho ny fireneko".
Mitaky ny “Fanatsaharana Ny Fankahalana Ary Hampanjaka Ny Fitiavana” Ny Diabem-Pireharehana Ao Manila
Azia Atsinanana 30 Jona 2016
"Amin'ity taona ity, mila ny rehetra izahay mba hiaraka hoavy sy hampandroso ny fampielezankevitra ho an'ny fitiavana. Miantso ny Filipiana rehetra izahay mba hamela ny fitiavana hiditra ao an-tranony, ho ao amin'ny fiarahamonina, sy ny firenena iray manontolo."
Miboridana Sady Miasa Ireo Belarosiana ( Baikon'ny Filoha)
Eoropa Afovoany & Atsinanana 30 Jona 2016
Nanala ireo akanjony tao amin'ny toeram-piasana ireo mpisera aterineto Belarosiana, rehefa lasa nalaza ny lahatsary misy ny kabarin'i Filoha Lukashenka
Tanzaniana Iray Notoriana Noho Ny ‘Fanevatevana’ Ny Filoha Tao Amin'ny WhatsApp
Afrika Mainty 30 Jona 2016
Mulokozi no olona tratra farany tao Tanzania tamin'ny fandikana ny Lalàna vaovaon'ny heloka an-tserasera, izay miezaka hamaha ny olana toy ny sary mamoafadin'ny zaza , ny fandrahonana amin'ny aterineto, ny fisolokiana an-tserasera , fakana tsy ara-dalàna ny fifandraisana, sy ny famoahana vaovao tsy marina
36 No Maty Raha Kely Indrindra Vokatry Ny Herisetra Tao Amin'ny Seranam-piaramanidin'i Istanbul
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 30 Jona 2016
Manameloka ny ISIS tamin'ny fanafihana ny governemanta .Nanokatra maimaim-poana ny varavarany ho an'ireo mpandeha tafahitsoka avy amin'ny firenena maro samihafa ireo tokantrano sy ireo trano fandraisam- bahiny ao amin'ny tanàna lehibe indrindra ao Torkia
Ny Tompondaka An-tsary: Ny Fitsidihan'i Muhammad Ali Tao Iran Tamin'ny Taona 1993
Iràna 30 Jona 2016
Tamin'ny taona 1993, nanao fitsidihana tao Iran i Muhammad Ali, mpanao ady totohondry nahomby indrindra nandritra ny fotoana maro. Ny fivadihany ho silamo tamin'ny taona 1964 sy ny fandavan'ilay mahery hanao ady totohondry tao Vietnam no nitondra ny fifantohantsain'izao tontolo izao taminy.